juillet 2014 – filazantsaramada
Fiarahana nijery horonan-tsarimihetsika no namaranana ny taom- pianarana. Raha tsiahivina fohy, dia nanomboka tamin’iny taom-pianarana 2013/2014 iny ny fiaraha-miasan’ny Feon’ny Filazantsara (FF) sy ny Sekoly « Les 5 Ruches ». Izany moa dia vokatry ny hetahetan’ny Sekoly sy Rtoa Pauline mpiandraikitra ny lafiny ara-panahy ao aminy no sady mpiara-miasa an-tsitrapo rahateo amin’ny FF. Tanjona ny hitomboan’ireo ankizy […]
Publié parfilazantsaramada juillet 31, 2014 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Sekoly « Les 5 Ruches » Tanjombato/Antananarivo
« Sambatra izay voavela ny helony sy voasarona ny fahotany. Sambatra izay olona tsy isain’i Jehovah heloka. » Romana 4:7-8 – Ny ota na ny heloka dia manambara ny fahadisoantsika eo anatrehan’i Jehovah Andriamanitra mpamorona antsika: Raha ao anatin’ny fahotana isika dia mitoetra eo ambany fahatezeran’ Andriamanitra. Raha ny malaza dia ny hoe Andriamanitra dia fitiavana, fa […]
Publié parfilazantsaramada juillet 25, 2014 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur RAHA MIAIKY …
Fanitarana ny fandefasana fandaharana amin’ny radio. Araka ny vinavina ao amin’ny fandaharan’asa amin’ity taom-piasana 2014-2015 ity dia kasaina halefa any amin’ny faritra hafa eto Madagasikara ny fandefasana amin’ny radio ny fandaharana « Henoy ny feony ». Vita soamantsara tamin’ny 15 jolay teo tany Toliara ny fanaovan-tsonia ny fifanarahana amin’ny Radio Université FM 91.4 any an-toerana, teo amin’Atoa […]
Publié parfilazantsaramada juillet 23, 2014 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur « Henoy ny feony »
IO FAHAZARANA IO:
« Fa tahaka ny tamin’ny andro fony tsy mbola tonga ny safo-drano, ka nihinana sy nisotro ny olona ary nampaka-bady sy namoaka ny ampakarina, mandra-pihavin’ny andro izay nidiran’i Noa tao amin’ny sambo-fiara, ary tsy fantany mandra-pihavin’ny Safo-drano izay nandringanana ny olona rehetra, dia ho tahaka izany ny fihavian’ny Zanak’olona. » Matio 24:38-39 Raha ny heviny iray ny […]
Publié parfilazantsaramada juillet 21, 2014 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur IO FAHAZARANA IO:
Fanolorana Diplaoma ireo mpianatra nahavita ny Taona Faharoa Ny fotoana fanolorana Diplaoma ireo mpianatra nahavita ny Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana (FSMI) mandritra ny fanompoam pivavahana mandritra ny Alahady dia natao indrindra koa entina hanentanana sy hitarihana ireo kristiana hiroso amin’ny fandinihana ny Tenin’Andriamanitra. Maro ireo Fiangonana mpiara-miasa izay manasa ny Feon’ny Filazantsara (FF) hanantateraka izany […]
Publié parfilazantsaramada juillet 17, 2014 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana (Cours Biblique par Correspondance)
« Ao aminy koa hianareo, rehefa renareo ny tenin’ny fahamarinana, dia ny filazantsara famonjena anareo, -eny, ao aminy koa hianareo, rehefa nino, no nasiana tombo-kase tamin’ny Fanahy Masina araka ny teny fikasàna. » (Efesiana 1:13) Fitaovana iray entina manamarika fifanekena ny TOMBO-KASE. Maro no azo ilazàna azy io saingy izay kely indrindra no asehontsika eto. Famantarana manokana, […]
Publié parfilazantsaramada juillet 11, 2014 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur TOMBO-KASE
« Fa mpiara-miasa amin’Andriamanitra izahay; ary sahan’Andriamanitra sy trano narafitr’Andriamanitra hianareo » I Korintiana 3.9 Feno folo taona tamin’ity taona 2014 ity ny fiaraha-miasan’ny Mpitandrina ANDRIANAIVOMAHENINTSOA NATANAELA. H mianakavy sy ny Fiangonana FJKM Ambohijoky Fihavanana. Fiaraha-mivavaka ho fisaorana sy fanomezam-boninahitra an’Andriamanitra no nentina nanamarika izany; nanomboka ny Alakamisy 03 Jolay 2014 ka hatramin’ny Alahady 06 Jolay 2014 […]
Publié parfilazantsaramada juillet 10, 2014 juillet 10, 2014 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Fitohizan’ny fiaraha-miasa eo amin’ny Feon’ny Filazantsara (FF) sy ny FJKM Ambohijoky Fihavanana
« Hiainga aho, dia hody any amin’ny raiko ka hanao aminy hoe: Raiko o, efa nanota tamin’ny lanitra sy teo anatrehanao aho ka tsy mendrika hatao hoe zanakao intsony;… » (Lioka 15:18-19a) Ny Fitiavan’Andriamanitra: Tamin’ny fanoharana nataon’i Jesosy ny amin’ilay zanaka adala dia niahy ity zanany ity ilay Ray ary tsy nanana ny naha ory azy loatra; […]
Publié parfilazantsaramada juillet 5, 2014 juillet 5, 2014 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur NA DIA FONY MBOLA MATIN’NY FAHADISOANA AZA ISIKA, DIA NAHAVELONA ANTSIKA ANDRIAMANITRA.
Mivelatra ny fitoriana ny Filazantsara eny amin’ny Sekoly ambony. Araka ny efa voalaza teo aloha dia nanomboka ny fiaraha-miasan’ny Feon’ny Filazantara (FF) sy ny Sekoly tsy miakina ISPPS izay manofana mpitsabo mpanampy sy mpampivelona (Paramédicaux). Ny Talata 01 Jolay 2014 teo àry dia nanao fanazavàna sy fanentanana mivantana mikasika ny Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana (Cours […]
Publié parfilazantsaramada juillet 3, 2014 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Programan’asa eo amin’ny sehatry ny tanora.